ကဆြုံးသှားတဲ့ သားလေးရဲ့ ဓာတျပုံလေးကို ကိုငျပွီး ရငျကှဲမတကျ ခံစားနရေရှာတဲ့ ဖခငျတဈဦး……. – Youth Bar
ယခု ဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနေ ကွောငျ့ အသကျ ဆုံးရှုံးသှားရတဲ့ သူတှေ ထဲမှာ ပညာတတျ လူငယျလေးတှေ ၊ မိသားစုအတှကျ ရုနျးကနျပေးနေ ရတဲ့ သူတှအေမြား အပွား ပါဝငျ နတော ဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ လညျး အသကျ(၂၃) နှဈအ ရှယျပဲ ရှိ သေး တဲ့ မောငျဇယြောလငျး (ခ)ဇယြောမြိုးနိုငျ က မိ သားစု ရဲ့စား ဝတျနရေေးအ တှကျ (၃၀.၃.၂၀၂၁) မှာအလုပျ သှားလုပျရငျး ကညျြထိ မှနျကာ ကဆြုံးသှားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။မောငျဇယြောမြိုးနိုငျ တို့မိသားစု က အခွခေံလူတနျးစား တှေ ဖွဈတာ ကွောငျ့ ဒီသားလေး အပျေါပဲ မှီခိုနကွေ ရတာ ဖွဈပါတယျ။
မောငျဇယြောမြိုးနိုငျ က မိသားစုကို သူတတျတဲ့ ပညာလေး နဲ့ လုပျကြှေးပွုစု နတေဲ့ သားလိမ်မာလေး တဈယောကျဖွဈပါတယျ။အခုလိုမြိုး မိသားစုအ တှကျ အားကိုး ရတဲ့ သားလေးက အသကျ ပေးသှားရ တာကွောငျ့ ကနျြရဈသူ မိသားစုအနေ နဲ့ လညျး အားကိုးစရာ မရှိတော့တာ ဖွဈပါတယျ။ဖခငျဖွဈသူ ဆိုရငျလညျး ကဆြုံးသှား တဲ့ သားလေး ရဲ့ ဓာတျပုံကိုရငျခှငျထဲမှာ ပိုကျထားပွီး အရမျး ခံစားနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ပွညျသူတှေ ကလညျး သားလေးကို အရမျးခဈြတဲ့ ဖခငျရဲ့ပုံရိပျတှကေိုကွညျ့ ပွီး စိတျမကောငျး ဖွဈနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလို ဖွဈရပျ ကွောငျ့ ကနျြရဈသူ မိသားစု ရဲ့ ရှရေ့ေးလညျး အခကျအခဲ မြားစှာ ဖွဈပျေါ လာနိုငျလို့ ပွညျသူလူထုကလညျး ဝိုငျးဝနျးပွီး ကူညီ ဖေး မပေး နကွေတာ ဖွဈ ပါတယျ။မောငျဇယြောမြိုးနိုငျ ရဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ကလညျးကနျြရဈသူ မိသားစုအတှကျ ကူညီပွီး အလှူခံပေးနကွေတာဖွဈပါတယျ။သားလေးရဲ့အလောငျးဘေး နား ကနမေခှာဘဲ ဝမျးနညျး ခံစားနရေတဲ့ ဖခငျဖွဈသူ ရဲ့ ပုံရိပျလေးတှေ ကို ပွညျသူ တှေ က စိတျမကောငျးဖွဈစှာနဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ Shareနကွေလို့ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ကျဆုံးသွားတဲ့ သားလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို ကိုင်ပြီး ရင်ကွဲမတက် ခံစားနေရရှာတဲ့ ဖခင်တစ်ဦး…….
ယခု ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ ကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ သူတွေ ထဲမှာ ပညာတတ် လူငယ်လေးတွေ ၊ မိသားစုအတွက် ရုန်းကန်ပေးနေ ရတဲ့ သူတွေအများ အပြား ပါဝင် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် လည်း အသက်(၂၃) နှစ်အ ရွယ်ပဲ ရှိ သေး တဲ့ မောင်ဇေယျာလင်း (ခ)ဇေယျာမျိုးနိုင် က မိ သားစု ရဲ့စား ဝတ်နေရေးအ တွက် (၃၀.၃.၂၀၂၁) မှာအလုပ် သွားလုပ်ရင်း ကျည်ထိ မှန်ကာ ကျဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဇေယျာမျိုးနိုင် တို့မိသားစု က အခြေခံလူတန်းစား တွေ ဖြစ်တာ ကြောင့် ဒီသားလေး အပေါ်ပဲ မှီခိုနေကြ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်ဇေယျာမျိုးနိုင် က မိသားစုကို သူတတ်တဲ့ ပညာလေး နဲ့ လုပ်ကျွေးပြုစု နေတဲ့ သားလိမ္မာလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး မိသားစုအ တွက် အားကိုး ရတဲ့ သားလေးက အသက် ပေးသွားရ တာကြောင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုအနေ နဲ့ လည်း အားကိုးစရာ မရှိတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူ ဆိုရင်လည်း ကျဆုံးသွား တဲ့ သားလေး ရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုရင်ခွင်ထဲမှာ ပိုက်ထားပြီး အရမ်း ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေ ကလည်း သားလေးကို အရမ်းချစ်တဲ့ ဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့် ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဖြစ်ရပ် ကြောင့် ကျန်ရစ်သူ မိသားစု ရဲ့ ရှေ့ရေးလည်း အခက်အခဲ များစွာ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်လို့ ပြည်သူလူထုကလည်း ဝိုင်းဝန်းပြီး ကူညီ ဖေး မပေး နေကြတာ ဖြစ် ပါတယ်။မောင်ဇေယျာမျိုးနိုင် ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကလည်းကျန်ရစ်သူ မိသားစုအတွက် ကူညီပြီး အလှူခံပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သားလေးရဲ့အလောင်းဘေး နား ကနေမခွာဘဲ ဝမ်းနည်း ခံစားနေရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပြည်သူ တွေ က စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ Shareနေကြလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။